किन दिए र कसलाई दिए चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले हड्डी धुलो पारिदिने चेतावनी ? – Online Annapurna
किन दिए र कसलाई दिए चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले हड्डी धुलो पारिदिने चेतावनी ?
२८ आश्विन २०७६, मंगलवार ०६:२१ October 15, 2019 196 Views
काठमाडौं, असोज २८- चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपाल भ्रमणका समयमा चीनलाई टुक्र्याउने प्रयास गर्नेको हड्डी धुलो बनाइदिने चेतावनी दिएका छन् ।
चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यम ‘सीसीटीभीले सोही दिन प्रकाशित गरेको उक्त खबरलाई अरु अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले पछिल्लो दिन प्रकाशित गरेका छन् ।
राष्ट्रपति सी चिनफिङले अत्यन्त कठोर भाषामा चीनलाई टुक्राउने प्रयास गर्नेहरुको हड्डी धुलो बनाइदिने धम्की दिएको चिनियाँ सरकारी समाचार संस्था ‘सिन्ह्वा’ले पनि जनाएको छ ।
‘बीबीसी’लगायत अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरुले चिनियाँ विदेश मन्त्रालयलाई उधृत गर्दै प्रकाशित गरेको समाचारले अहिले सनसनी मच्चाएको हो ।
सीको चेतावनी सन्दर्भमा एक चिनियाँ प्राज्ञ सी यिहोङले हङकङको अवस्था गम्भीर भएकाले सीले अमेरिकासहितका प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा त्यहाँ जारी हिंसाको पक्षमा उभिनेहरुलाई चेतावनी दिएको ‘साउथ चाइना मर्निङ पोस्ट’सँग टिप्पणी गरेका छन् ।imagekhabar.com -एजेन्सीको सहयोगमा ।